Puerto Rico ịmaliteghachi na njem nleta na ọnwa na-abịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Puerto Rico ịmaliteghachi na njem nleta na ọnwa na-abịa
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ Puerto Rico • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Dị ka akụkụ nke atụmatụ imeghe ụzọ anọ nke Island, Puerto Rico kwupụtara na ọ ga-abụ nke ọma mepee ọzọ na July 15. Agbanyeghị, osimiri amaliteghachila site na iji anwụ na-arụ na ihe omume ntụrụndụ ndị ọzọ ugbu a kwere ka ịmachi ndị otu nọ naanị otu ezinụlọ.
Otu ihe ịkọwapụta, dịka ị nwere ike ịma, bụ na Puerto Rico ejirila nlezianya kpachara anya kemgbe mmalite nke Covid-19, nwere atumatu iji gbochie mgbasa nke nje a na agwaetiti ahụ dum, gụnyere ịbụ onye mbụ US kwadoro iji mejuputa usoro siri ike dịka oge ngagharị na Island. N'ihe zuru oke ịdị ọcha dị na Island-dum, a na-etinyekwa atumatu ndị mejupụtara nke na-agbaso US Travel Association (USTA) Ntuziaka Ahụike na Nchekwa yana usoro a na-ahụ maka mpaghara, nke Puerto Rico Tourism Company mepụtara.
N'okpuru bụ ụfọdụ ngwa ngwa ngwa njem ndị njem kwesịrị ịma ka ha na-eme atụmatụ nleta ha na Puerto Rico:
Oge a gwara lọta na-adịgide site na June 30 mana ọ gbatịpụrụ site na 10:00 PM - 5:00 AM; ewepu bụ maka ihe mberede.
E megheela osimiri dị iche iche site na ịda anyanwụ na ihe omume ntụrụndụ ndị ọzọ ugbu a na-ekwe ka ịmachi nzukọ ndị otu naanị ndị nọ n'otu ezinụlọ.
Poollọ nkwari akụ na-emeghe ma na-amụba ikike na 50% malite na June 16.
Lọ oriri na ọụrantsụ na-emeghe ma na-amụba ikike 50% amalite June 16.
A na-emeghe ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ndị ọzọ na-ere ahịa, mana enweghị ikike ịbanye na ntụrụndụ ugbu a. Oge akara aka achọrọ.
Casinos na ama egwuregwu ga-anọchi ruo oge ọzọ.